Ku noqoshada shaqadayda Mac-da ayaa ka baaba'aysa macOS Mojave | Waxaan ka socdaa mac
Ku noqo muuqaalkeyga Mac-ga wuu ka baaba'aa macOS Mojave
Maaddaama ay maalmaha sii socdaan, annaga isticmaaleyaasha ah ee aan ku dhiirrigelinay inay rakibaan beta-kii ugu horreeyay ee macOS Mojave, waan hubinaynaa waa kuwee shaqooyinka cusub ee la waayey gabi ahaanba nooca cusub ee macOS, oo ah nooca ku imaan doona noociisa ugu dambeeya dhamaadka bisha Sebtember, dhowr maalmood ka dib markii la bilaabay, sidoo kale nooca ugu dambeeya, ee iOS 12.
Maalmo ka hor, waxaan soo daabacnay maqaal aan kugu wargelinay mid ka mid ah xulashooyinka ay Apple ka saartay macOS Mojave, shaqada noo ogolaaneysa habee xisaabaadka Twitter iyo Facebook kooxdeena si aan si dhakhso leh ula wadaagno waxa aan rabno asal ahaan iyada oo loo marayo codsiyada, iyada oo aan laga sameynin biraawsarka. Waxay umuuqataa inaysan kaligeed ahayn.
Ikhtiyaar kale oo sidoo kale la waayey markii la soo saaray beta-kii ugu horreeyay ee macOS Mojave, waxaan ka helaynaa muuqaalka 'Back to My Mac', shaqeyn ay ugu wacan tahay caannimadeeda oo hooseysa (oo ay ugu wacan tahay waxtarkeeda oo xadidan) waxay umuuqataa in gebi ahaanba laga saaray nooca xiga ee macOS. Sidoo kale waa suurtagal in, sida xulashooyinka wadaagga ee shabakadaha bulshada, ay kaliya ka dhammaadeen beta-kii ugu horreeyay.
Muuqaalka 'Back to My Mac' wuxuu u oggolaanayaa dadka isticmaala Mac si ammaan ah ugu xir internetka adigoo adeegsanaya Mac kale. Shaqadan, oo qayb ka ah iCloud, waxaa loo adeegsadaa wadaagista faylka iyo shaashadda terminalka labadaba. In kasta oo shaqadani ay noo siiso xalka cajiibka ah ee warqadda, laakiin hawlgalku weligii sidii la rabay uma noqon, waxayna u muuqataa in Apple aysan doonayn inay waqti ku lumiso hagaajintiisa.
Maanta, waxaan heli karnaa adeegyo kale oo na siiya isla shaqooyinka laakiin qaab aad u badan oo xirfad leh oo la filaayo, sida TeamViewer. Maalmaha soo socda, waxaan sii wadi doonaa inaan isha ku hayno xulashooyinka qaabeynta ee macOS Mojave si aan u aragno haddii aan helno astaamo cusub ama qaar ka mid ah kuwii horey u jiray, oo la waayey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Mojave » Ku noqo muuqaalkeyga Mac-ga wuu ka baaba'aa macOS Mojave
Ikhtiyaarka aad ku wadaagi karto feylasha internetka sidii aad ugu jirtay shabakaddaada maxalliga ah ma lahan koox-wadaage, ugu yaraan fudeydkaas. In kasta oo ay had iyo jeer u baahan tahay xiriir la leh xog-ururin sare iyo xawaare soo degsasho ah.
Jawaab Gastón Aquiles Paz Pozo
Apple waxay waydiisaneysaa horumariyeyaasha inay u wareejiyaan Safari kordhinta biraawsarka laftiisa